AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar 5.9.9-free Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.9.9-free လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား ရာသီဥတု AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar
AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
AccuWeather နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်နှင့်တိကျမှန်ကန်မုန်တိုင်းသတိပေးချက် Get - သင်တို့အပေါ်မှာအားကိုးနိုင်ပါတယ်™သာလွန်တိကျမှန်ကန်မှု။
တိကျမှန်ကန်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်, Real-time သတိပေးချက်များ, နှင့်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များရရှိနိုင် on- ဝယ်လိုအားဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေ့ရာသီဥတုကခန့်မှန်းချက်, ဟာရီကိန်းနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ပိုပြီးရယူပါ!
မုန်တိုင်းရာသီလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့် AccuWeather ကနေရာသီဥတုသတိပေးချက်၎င်းတို့၏တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်သာလွန်ဖြစ်ကြသည်။ နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတိပေးချက်များနှင့်တိကျမှန်ကန်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူရာသီဥတုရုတ်တရက်ပြင်းထန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုအဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။ လေတိုက်ရှိပါတယ်ရှိမရှိဒီတော့ပင် heatwave, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလေဆင်နှာမောင်း - သင် AccuWeather ရဲ့ရာသီဥတုကရေဒါနှင့်အတူရှေ့သို့တဦးတည်းခြေလှမ်းဆက်နေလို့ရပါတယ်။
တိကျမှန်ကန်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် - သင် AccuWeather သုံးပြီးကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်5အကြောင်းပြချက်:
1. တိကျမှန်ကန်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အခါတိုင်းနှင့်နေရာတိုင်းမှာသူတို့ကိုသင်လိုအပ် - AccuWeather ရဲ့သာလွန်တိကျမှန်ကန်မှုကို™သင်ချကြကုန်အံ့မည်မဟုတ်။
ဘေးကင်းလုံခြုံသငျသညျစောင့်ရှောက်သော 2. ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များ - တစ်ဟာရီကိန်း မှစ. တစ်လေဆင်နှာမောင်းရန်, Real-time ရာသီဥတုသတိပေးချက်များနှင့်မုန်တိုင်းသတိပေးချက်နှင့်အတူမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်မဆိုပြင်းထန်ရာသီဥတုဖြစ်ရပ်အဘို့ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်အတွက် 3. ယနေ့အပူချိန် - RealFeel Temperature®နည်းပညာသင်သည်ရာသီဥတုကြည့်ကြောင့်အမှန်တကယ်ခံစားရပုံကိုဘယ်လိုအကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြတယ်။
4. မိုးလေဝသ updates များကိုသင်သွားလေရာရာ၌ - သငျဝေးနေတဲ့အခါသင်အိမ်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရာသီဥတုမွမ်းမံမှုများမှာနေတဲ့အခါမှာဒေသခံခန့်မှန်းချက်ကိုရယူပါ။
5. တိုက်ရိုက်ရာသီဥတု 24/7 - ကြိုတင်မဲအတွက် 15 ရက်အထိ Check သို့မဟုတ်တိကျသောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တိုင်းမိနစ်ဘို့ငါတို့ရာသီဥတုရေဒါထွက်များစစ်ဆေး!
ဒေသခံခန့်မှန်းချက်ယနေ့ရဲ့အပူချိန်နှင့်ပိုပြီး! တိုက်ရိုက်ရာသီဥတု stats သငျသညျကို real-time ရာသီဥတု updates များကိုပေး။ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်များ, ဟာရီကိန်းအစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်ပင်တစ်လေဆင်နှာမောင်းခြေရာခံအနေဖြင့် - သင်လိုအပ်သမျှဟာပြင်းထန်ရာသီဥတုသတိပေးချက်များရယူပါ။
ဒီနေ့ရာသီဥတုကခန့်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်သွားပါ။ နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဟာရီကိန်းသို့မဟုတ်လေဆင်နှာမောင်းရာသီဥတုသတိပေးချက်များမှသင်ရသတင်းအချက်အလက်အဘယ်အရာကို type ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သငျသညျယနေ့ရာသီဥတုသို့မဟုတ်ယနေ့အပူချိန်ချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, AccuWeather တစ်ဦးခြားနားချက်နှင့်အတူရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းပါ!
နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက်, ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များ, မုန်တိုင်းသတိပေးချက်နှင့်ပိုပြီး! သင်တို့အဘို့ AccuWeather app ကိုအလုပ်ကကူညီလိမ့်မည်ဟုအင်္ဂါရပ်များ:
•သင် personalize နိုငျသောဒေသခံခန့်မှန်းချက်, သင်ဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. ။
•ယနေ့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။ သငျသညျ AccuWeather ရဲ့ရာသီဥတုကရေဒါနည်းပညာနှင့်အတူမည်သည့်နွေဦးရာသီဥတုကသတိပေးချက်အဘို့ပြင်ဆင်သောအနေကြောင်းသေချာစေရန် 15 ရက်မတိုင်မီကြည့်ပါ။
•တိုက်ရိုက်ရာသီဥတု, မိနစ်အားဖြင့်တစ်မိနစ်! နေ့စွဲရာသီဥတုသတိပေးချက်မှတက်အရှိဆုံးများအတွက်MinuteCast®ရာသီဥတု tracker ကြိုးစားပါ။
•မိုးလေဝသကြိုတင်ခန့်မှန်း AccuWeather ရဲ့သတင်းအဖွဲ့သည်ထံမှဗီဒီယိုများယိနှင့်အတူဘဝကိုမှယူဆောင်သည်။
•နေ့စဉ်ခန့်မှန်းချက် updates များကိုသင့်ရဲ့ဦးစားပေးအရသိရသည် filtered ။ သင်တို့အဘို့အသင့်လျော်တဲ့မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမည်သည့်ရာသီဥတုသတိပေးချက် Hide ။
သင်တို့အပေါ်မှာအားကိုးနိုင်ပါတယ်မိုးလေဝသမွမ်းမံမှုများ။ AccuWeather ရဲ့ရာသီဥတု tracker တွင်လေတိုက်အပြင်းအထန်သို့မဟုတ်နေရောင်ထဲမှာမီးရှို့ရာယဇ်ရတဲ့မရှိဘဲအပြင်မှာတစ်ဦးတနင်္ဂနွေစီစဉ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
ဒေသခံခန့်မှန်းချက်အဘို့အ AccuWeather ရဲ့သာလွန်တိကျမှန်ကန်မှု™နှင့်အတူ, သင်ကအမှတ်ရစရာအခိုက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သင်သွားလေရာရာ၌သို့မဟုတ်သင်သွားလေရာရာ၌, AccuWeather နှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသောရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းရ - သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသီဥတုကရေဒါ။
ယနေ့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်သင့်ရဲ့လက်ဖဝါး၌တည်ရှိ၏။ AccuWeather သင်သည်အနုပညာရာသီဥတု tracker နည်းပညာ၎င်း၏ပြည်နယ်နှင့်အတူယနေ့အပူချိန်အတှကျပွငျဆငျကူညီပေးသည်။ ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များအရှိဆုံးတိကျမှုအရင်းအမြစ်နှင့်အတူလေတိုက်သို့မဟုတ်နေရောင်အဘို့အဆင်သင့်ရယူပါ။
အခမဲ့ယနေ့ AccuWeather Download လုပ်ပြီးသင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ်ရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းအတွက်ဆုရသာလွန်တိကျမှန်ကန်မှု™ပျော်မွေ့။
AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 46.9k 28.59M
AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.9.9-free
App Name: AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar
Release date: 2019-06-12 03:43:18
AccuWeather: Weather Alerts & Live Storm Radar APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ